Bosolac विशेष ग्रेड XO ब्रांडी ml०० मिलि 700०% abv, चीन Bosolac विशेष ग्रेड XO ब्रांडी ml०० ml %०% abv निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना - Goalong Liquor (समूह)
Bosolac विशेष ग्रेड ब्रान्डी XO प्रुल्हो फ्रान्समा डिस्टिल्ड गरिएको छ, चीनमा मिश्रित र बोतलमा। विदेशी अंगूर, सामग्री र प्रविधिले यसको अद्वितीय स्वादको ग्यारेन्टी गर्दछ। हातले बनाएको गिलासको बोतलले यसको भव्यता थप्छ। ग्राहकहरूले यसलाई पार्टी र उत्सवका अवसरहरूका लागि राम्रो विकल्पको रूपमा लिन्छन्। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन कि तपाईंले यसको पूर्ण-शारीरिक स्वाद र अलि बलियो अग्रिम मन पराउनुहुनेछ।
Liuyang Goalong रक्सी डिस्टिलरी कं, लिमिटेड Liuyang शहर मा दुई प्रकार को औद्योगिक पार्क मा स्थित छ। Liuyang Goalong रक्सी डिस्टिलरी कं, लिमिटेड Liuyang शहर मा दुई प्रकार को औद्योगिक पार्क मा स्थित छ, क्षेत्र 23259.67 वर्ग मिटर.5ठूला भवनहरु, प्रत्येकको निर्माण क्षेत्र लगभग 5000 वर्ग मिटर छ। जुन चीनको पहिलो ठूलो एकल माल्ट व्हिस्की डिस्टिलरी हो। र यो गोलोङ लिकर ग्रुपले लगानी गरेको चौथो डिस्टिलरी हो।
1. यो ब्रान्डी साँच्चै6वर्ष पुरानो हो?
, हो फ्रान्समा विशेष ग्रेड ब्रान्डी डिस्टिल्ड र मिश्रित, जो फ्रान्समा बुढेसकालमा छन् ओक ब्यारेल6वर्ष भन्दा बढी। र चीनमा गोलोङ लिकर समूहद्वारा बोटिङ।
2. के हामी लेबलमा हाम्रो आफ्नै लोगो वा डिजाइन प्रयोग गर्न सक्छौं?
हो, हामी अनुकूलन डिजाइनहरू स्वीकार गर्छौं। तपाईलाई डिजाइन गर्न मद्दत गर्न डिजाइनरहरूको टोली पनि छ।
3. बोतल को भोल्युम के हो?
हामीसँग हातमा 700ml बोतल छ। हामी तपाईंको आधिकारिक बोतलको लागि मोल्ड खोल्न सक्छौं।
4. मोल्ड खोल्ने चक्र र लागत के हो?
हाम्रो मोल्ड खोल्ने चक्र सामान्यतया दुई हप्ताको हुन्छ, मेकानिकल बोतलहरू र म्यानुअल बोतलहरूमा विभाजित हुन्छ, र लागत US$300 र US$1500 बीचको हुन्छ। भविष्यमा दीर्घकालीन सहयोगलाई ध्यानमा राख्दै, हामी पहिलो ठूलो अर्डरको लागि मोल्ड खोल्ने शुल्क फिर्ता गर्ने विचार गर्न सक्छौं।
5. स्थानीय क्षेत्रमा ढुवानी गर्दा सामानहरू गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएमा मैले के गर्नुपर्छ?
हाम्रो प्याकेजिङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय यातायातको लागि उपयुक्त छ र क्षति दर अत्यन्त कम छ। कृपया सामानहरू प्राप्त गरेपछि2घण्टा भित्र फोटोहरू लिनुहोस् र प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुहोस्। हामी वास्तविक हानिको आधारमा तपाईंको अर्को अर्डरलाई क्षतिपूर्ति दिनेछौं।
6. गलत प्रक्रिया वा उत्पादनले बिक्रीलाई असर गर्ने कारणले वाइन लीक र लेबल त्रुटिहरू भएमा मैले के गर्नुपर्छ?
लेबलिङ मेशिन द्वारा संचालित भएको कारण, त्रुटि दायरा धेरै कम छ, र
नाङ्गो आँखाले त्रुटि देख्न गाह्रो छ, त्यसैले तपाईं ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। वाइन लिकेजको समस्याको सन्दर्भमा, ढक्कन धेरै पटक सुधार गरिएको छ, रक्सी चुहावटको सम्भावना धेरै कम छ। यदि यो वास्तवमै कारखानाको कारणले हो भने, कृपया प्रमाणको रूपमा फोटो लिनुहोस्, र हामी सम्बन्धित जिम्मेवारी वहन गर्न इच्छुक छौं।
7. हाम्रो बजारमा ग्राहकहरू चाइनिज खानाको धेरै घृणित छन्, किनभने चीनमा धेरै खाद्य समस्याहरू छन्, अन्त बजारको शंका कसरी हटाउने?
आवश्यक भएमा, हामी QS परीक्षण वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित BV, तेस्रो-पक्ष निरीक्षण, इत्यादिको साथ सहयोग गर्न सक्छौं। पूर्ण रूपमा गुणस्तरको ग्यारेन्टी। अन्य प्रमुख स्पिरिट ब्रान्डहरूको तुलनामा, हाम्रा उत्पादनहरू लागत-प्रभावी छन्। मूल्य मध्यम छ र गुणस्तर ग्यारेन्टी छ। मलाई विश्वास छ कि यसले निश्चित रूपमा तपाईलाई ठूलो बजार खोल्न मद्दत गर्नेछ।
8. बल्क वाइन बीच भिन्नता छ भने के हुन्छ
र नमूना शराब? प्रत्येक पटक नमूना पठाइन्छ, हामी सम्बन्धित लेबल टाँस्नेछौं र कम्पनीको नमूना प्रदर्शन र्याकमा प्रतिलिपि राख्नेछौं। बल्क सामानहरू उत्पादन गर्दा, हामी नमूनाहरू अनुसार डिप्लोय र उत्पादन गर्नेछौं, त्यसैले तपाईंले मूल रूपमा विचार गरिरहनुभएको समस्या अवस्थित छैन।
9. म6बोतल ह्विस्की किन्न चाहन्छु। के तपाईको कम्पनीले नगद अन डेलिभरी सेवा प्रदान गर्न सक्छ?
रक्सी खतरनाक र कमजोर भएकोले, हामी तपाईंलाई6बोतलहरू किन्न सिफारिस गर्दैनौं। तपाईं पहिले एक बोतल प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय एक्सप्रेसको कारण, हामी डेलिभरीमा नगद स्वीकार गर्दैनौं।
10. सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियामा कतिवटा निरीक्षणहरू सम्भव छन्, र कति पूर्ण निरीक्षणहरू?
हाम्रा प्रत्येक पदहरूले आपसी निरीक्षण र आत्म-निरीक्षण सञ्चालन गर्नेछन्। थप रूपमा, त्यहाँ2अनियमित निरीक्षणहरू छन्
र 1 पूर्ण निरीक्षण।
ढक्कन सिंथेटिक कर्क जिंक मिश्र
स्वाद: सन्तुलित र चिल्लो स्वाद, धनी तालुको अनुभव
तपाईको सप्ताहन्तलाई विशेष ग्रेड ब्रान्डीको साथ अझ विशेष बनाउनुहोस्, यो साथीहरूसँग रूफट बार्बेक्युक्वालिटी समयका लागि उत्तम छ, र दिउँसो घाममा। जीवनसाथीसँग साझेदारी गर्नुहोस्, वा आइस र गेरीन्शमा खन्याउनुहोस् ताजा टुक्राको चुना संग। सप्ताहन्तको नयाँ स्वादका लागि बोसोलाक विशेष ग्रेड ब्रान्डीको मजा लिनुहोस्।